2020 Akanakira Zviratidzo Zvigadzirwa, Tsika inflatables Fekiti | Isimba
Isu tiri nyanzvi yekugadzira inogadzira pamusoro pe10000 airbags.
KUSVIRA PASI ZVESIMA ZVESU
Matoyi Ane Simba ndiwo mumwe wako akanakisisa kana iwe uchitarisira kutsiva gomba rako mune yako trampoline park kana nzvimbo yekumhanyisa nema airbags, kana kuti iwe unoda fre freak airbags kuti ubudise rekodhi-kuputsa foleni.
Matoyi Ane Simba ndiyo shamwari yako yepamoyo kana iwe uri kutsvaga kutsiva gomba rako mu trampoline park kana nzvimbo yemitambo neyemuchikwama, kana urikuda kuita marekodhi-kuputsa mikuru kupinda muhombodo huru yemuchadenga. Iwe unoda here kuwana kuwedzera kufara mune yako yakakwirira tambo kosi, kana iwe uine iripo chikuva kana imwe nzvimbo yakawandisa? Kutsvaga nzvimbo nyowani yekuwedzera kune yako paki yekukubatsira iwe kugadzira mari yakawanda uye kusiyanisa yako portfolio yemabasa? Stunt Airbag isarudzo yakanaka!
Tsika inflatable yekusvetuka bouncer yeKisimusi-Yakasimba Matoyi
2020 Yakanyanya kusvetuka airbag fekitori yakananga inopa inflatable kusvetuka bouncer yekrisimesi pamakwikwi emutengo, bata Simba rine fekitori.
Yakasimba Inokanganisa Airbag Yakaputika-kumusoro Airbag Yakachengeteka Kugadzika BMX
Yakasimba fekitori inopa vatengi wepasi rose inflatable airbag, pusha mweya mabhegi ekuchengetedza kutakura, taura nesu uye uwane yemahara 3d dhizaini ikozvino.
Yakasimba Yekunze Airbag, Yakanakisa Landing Airbag
Kutsvaga chetsika airbag? Bata Simba rine matoyi kune yako imwe-mira kutengesa airbag maitiro pamakwikwi, chengetedza mutengo wako ikozvino.
Isimba Airbag Bmx, Universal Airbag Kugadzira
2020 yakakurumbira mhando airbag bmx, universal airbag paMagetsi ane inflatable matoyi fekitori, yakanakisa fekitori mutengo, kuwana ruzivo.
Isu tiri vamwe vevakatanga kugadzira vemoyags vane nyanzvi R& D zvikwata.
Isu tinobatanidza kukosha kukuru kune kusimudzirwa kwechigadzirwa uye kuyedzwa. Kufambira mberi zvakanaka ndiko kutsvaga kwedu. Matoyi Ane Simba akatengesa airbags anopfuura zana nemakumi mashanu kusvika parizvino. Isu tinogara tichipa zvigadzirwa zvakanakisa uye nekushanda kwakanaka kwevatengi pasi rese.
Nekuda kwekuvakwa kwayo kwakasimba uye kurerutsa, iyo BMX Airbag yave yakakurumbira airbag mumaski resorts, skate parks uye bhasiketi mapaki. Iyo Mhepo Track yekudzidziswa! Iyi Air Track inoshanda zvakakwana kune ese epasi pekudzidzira uye kudonha anopfuura. Kubva kumitambo yekumhanyisa kusvika kupaki, kubva kung-fu kirasi kuenda ku physiotherapy, iri hwaro hukuru hwemhando dzakasiyana dzemitambo uye nzira dzekudzidzira.
Chigadzirwa chedu chiri padanho repamusoro-mhando. Isu tinopa kukwikwidza kwakanyanya uye zvine mutengo mitengo. Isu tinomhanya yakakura kwazvo-yekukwanisa kugadzira mitsara. Isu tinogara tichitenda kuti premium mhando, sevhisi yakanaka, uye kukwikwidza mutengo ndiyo nzira chete yekutarisa musika wakakura. Isu tinotarisa kune ruzivo rwekugadzira, kugadzira, kugadzira kwekuraira, uye kutumira.
Isu tiri vekutanga kutungamira kugadzirwa kwemhepo mabags.
Ane Simba Toys Co, Ltd inogadzira inflatables. Isu takashongedzerwa zvakanaka nemidziyo yekuyedza uye yakasimba tekinoroji. Semumwe wevanotungamira kugadzira inflatable muChina, tawana mukurumbira wemhando uye basa mumusika wepasi rese, kunyanya muEurope, USA, Australia, uye Middle East.
Yedu portfolio spans Yeuka Airbag, Bumper Bhora, inflatable Tende, Nhabvu Shamba, Mabhiza, inflatable Play Ground, Slide, Combo, Zvipingamupinyi, Mitambo yemitambo, Mvura Mitambo, Tunnels, inflatable Model, Arch, Krisimasi Katuni, PVC Balloon, Air Dancer, Roller Bhora uye zvakadai zvigadzirwa zvinoputika.